64 Haiwa dai makanga mabvarura matenga, dai makanga maburuka,+ dai makomo akanga adengenyeswa nemi,+ 2 seapo moto unopisa tsotso, uye moto unovirisa mvura, kuti muzivise mhandu dzenyu zita renyu,+ kuti marudzi adedereswe nemi!+ 3 Pamakaita zvinhu zvinotyisa+ zvataisagona kutarisira, makaburuka. Makomo akadengenyeswa nemi.+ 4 Kubvira kare kare hapana kana akanzwa,+ uyewo hapana akamboteerera, uyewo hapana ziso rakaona mumwe Mwari, kunze kwenyu,+ imi munoshandira iye anoramba achitarisira kwamuri.+ 5 Makasangana nomunhu aipembera nomufaro uye aiita zvakarurama,+ vaya vairamba vachikuyeukai munzira dzenyu.+ Tarirai! Patairamba tichitadza,+ imi makatsamwa+—takaramba takadaro kwenguva refu, zvino tingaponeswa here?+ 6 Tava somunhu asina kuchena, tose zvedu, mabasa edu ose akarurama akaita senguo dzepanguva yokuva kumwedzi;+ uye tose zvedu tichaoma semashizha,+ uye kukanganisa kwedu kuchatitakura sezvinoita mhepo.+ 7 Hakuna anodana zita renyu,+ hakuna anomuka kuti akubatei; nokuti mativanzira chiso chenyu,+ uye munoita kuti tinyangarike+ nesimba rokukanganisa kwedu. 8 Asi zvino, haiwa Jehovha, imi muri Baba vedu.+ Isu tiri ivhu,+ imi muri Muumbi+ wedu; tose zvedu tiri basa roruoko rwenyu.+ 9 Haiwa Jehovha, musanyanyisa kutsamwa,+ uye musayeuka kukanganisa kwedu nokusingaperi.+ Tapota, zvino tarirai: isu tose tiri vanhu venyu.+ 10 Maguta enyu matsvene+ ava renje. Ziyoni+ rava renje chairo, Jerusarema rava dongo.+ 11 Imba yedu youtsvene norunako,+ mamakarumbidzirwa nemadzitateguru edu,+ yava chinhu chokupisa nomoto;+ uye zvinhu zvedu zvose zvinokosha+ zvaparadzwa. 12 Haiwa Jehovha, mucharamba muchizvidzora pasinei nezvinhu izvi here?+ Mucharamba makanyarara motirega tichitambudzwa zvakanyanyisa here?+